atom Apex kugula
Ngaba ujonge ukuya phambili ngelixa udlala i-Apex Legends? Sukujonga phambili, njengoko i-GamePron inokukunika ukufikelela kwii-Apex Legends Hacks ezifumaneka kwi-Intanethi.
Thenga isitshixo semveliso esakho namhlanje kwaye ufumane ukufikelela kwi-Apex Legends Atom usebenzisa isitshixo sosuku olunye
Unokuthenga kwakhona isitshixo semveliso esikunika ixesha elininzi ngokuthenga isitshixo seVeki e-1
Asibeki mida, uyayenza! Thenga isitshixo seNyanga e-1 namhlanje kwaye ufumane ukufikelela kwangoko!
Kukangaphi usifumana isixhobo esiza kukuguqula sibe ngumatshini wokuphumelela ongayeki? I-GamePron inempumelelo kuphela kubasebenzisi bethu engqondweni, ke xa ufuna iziphumo, ukusebenzisa i-Apex Legends Hack yethu kuphela kwendlela.
Apex Legends Atom lomnqweno yimfumba Ulwazi
I-Apex Legends izakuvavanya izakhono zakho kunye namandla engqondo ngokukubeka ngokuchasene namakhulu abanye abadlali abanamava. Ayisiyiyo kuphela ukuba kufuneka ukhathazeke malunga namaqela oza kuhlala kuwo, kodwa wonke umntu ngokunjalo! Sebenzisa i-Apex Legends Atom hack kuya kukunika ithuba elifunekayo ukuze uphumelele kuzo zonke iimeko, nokuba ungumdlali onobuchule kangakanani. Ngeempawu ezimangalisayo kunye neninzi yokukhuselwa kokukopela ekuqwalaseleni, kuyamangalisa ukuba awusebenzisi ii-Apex Legends cheats! Khetha kwiintlobo zethu ezinkulu ze-ESP!
Unokwenza okuninzi ngokwenza enye yemisebenzi yethu emangalisayo, enje ngeRadar okanye chams; okanye unokukhetha nje ukuxhamla kwi-Apex Legends Aimbot. Inani leempawu lihenda ekuthetheni okuncinci, ngakumbi xa uneTshaba / Into ye-ESP.
Utshaba ESP kunye chams
Ulwazi lotshaba (umgama / ukuphatha izixhobo)
Into ESP enokuqwalaselwa nge icon
Utshintsho olutshintshayo / imibala yomhlobo.
Malunga ne-Apex Legends Atom
Nangona usenokuzibuza ukuba yintoni esenza ukuba sibe "yeyona ilungileyo", i-Gamepron yinkampani engasoze yahexa xa ujongene nobunzima. Oko kuthetha ukuba sihlala sikhupha amaqhina aphakamileyo amaNqaku e-Apex Legends ukuba nje sisebenza! Unokwenza iX-Ray Mod kwaye ubone malunga nayo nayiphi na into ongathanda ukuyenza, okanye uvule
Utshaba Izilumkiso zokuba ube nomlondolozi wakho. Ukuqhatha kulula ngokulula ukusebenzisa kwaye kunokufakwa nangoyena msebenzisi womqobelo, ulinde ntoni? Thenga ukufikelela kummangaliso we-Apex Legends Atom hack namhlanje kwaye awusoze ungazithembi ngelixa udlala.
Kutheni usebenzisa i-Apex Legends Atom ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ukhuseleko lweakhawunti yakho lubalulekile apha kwiGamepron, yiyo loo nto singathathi iindlela ezimfutshane ngokubhekisele kukhuseleko lwethu lokulwa ukukopela. Uhlala usezandleni ezilungileyo xa ukhetha ukusebenza nezixhobo esizikhethileyo apha, into engenakuthethwa kwabanye ababoneleli. Ngelixa abanye abaphuhlisi be-hack begxile ekwenzeni imali, sizinikezele ekuboneleleni abasebenzisi bethu ngeempawu ezizodwa ezifana ne-Aimbot ene-Smart Lock (kunye ne-Aim Key Selector!). Ngoluhlu olubanzi lweentshaba ze-ESP kunye ne-Item ESP ongakhetha kuyo, kuncinci kakhulu ongeke ukwazi ukubona.
Ukuba imenyu yomdlalo ongaphakathi yomdlalo uziva uxinekile kwaye ungaphenduli, uya kuba nexesha elibi. Abaphuhlisi bethu basebenze ngokusondeleyo nabanye babadlali abaphambili kwiiNgcaciso ze-Apex ukufumana eyona midlalo ilungileyo yomdlalo, evumela abasebenzisi bethu ukuba bafumane ngakumbi ngexesha labo lokudlala. Awusoze uphoswe lithuba lokubanga ukubulala, kwaye amathuba okuphumelela phantse kuwo wonke umdlalo owudlalayo aya kuba phezulu kakhulu. Ihlabathi liyimbatyisi yakho ngemenyu yethu engummangaliso yomdlalo, kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula nokwenza ngokwezifiso! Izinketho ziphantse zingapheli.
A1. Ukukopela akukho nzima ukusebenzisa. Ifuna ukubhaliswa kwi-Loader kunye ne-akhawunti yomphunga. Landela nje "indlela yokusebenzisa"
A2. Ukukopela kunokusasazeka, nangona kungahambelani nazo zonke iinkqubo zokuhambisa.
Abadlali abagulayo nabadiniweyo kukonakaliswa kwi-intanethi akufuneki baphinde bajongane nayo, njengoko ii-Apex Legends Hacks zethu ziya kutshintsha izinto zibe ngcono.
Lutshabalalise ukhuphiswano lwakho ngelixa usebenzisa i-Apex Legends Atom Hack!
Ilindelwe Lawula kunye ne-Apex Legends Atom Hack yethu?